ကွန်ပျူတာ နှင့် မော်တော်ယာဉ့်ပြုပြင်ခြင်း [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ > ကွန်ပျူတာ နှင့် မော်တော်ယာဉ့်ပြုပြင်ခြင်း
View Full Version : ကွန်ပျူတာ နှင့် မော်တော်ယာဉ့်ပြုပြင်ခြင်း
ကွန်ပျူတာ နှင့် မော်တော်ယာဉ့်ပြုပြင်ခြင်း ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်
ယခုအခါ Computer နည်းပညာနှင့်အတူ မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာများ တိုးတက်လာမှုကြောင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ရှုပ်ထွေးသကဲ့သို့ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန် မော်တော်ယာဉ့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြုရန် လိုအပ်လာပါသည်။
 Workshop Data Manual software များအသုံးပြုခြင်း
Auto Data Manual Software တခုအကြောင်းဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်
ကားအမျိုးအစားများစွာ တို့ရဲ့ အချက်အလက် အမျိုးမျိုးကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာကြည့်ခွင့်ရတဲ့ Holden 1997-98 Vectra ရဲ့ Data တွေကိုကြည့်ကြရအောင် Engine က X25XE 25 cc 125KW @5800 rpm
Data link connector တည်နေရာ နှင့် Trouble code များလေ့လာရန်
Trouble code ကိုကလစ်လိုက်ပါ သင်သိလိုသမျှ Link တွေနဲ့အတူတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်တိုင်ရှာချင်ယင်ဒီမှာ http://www.autodata.com.au/software.php?product=1 Click on ONE MODEL DEMO.
အကိုရေ...သူက၊ protocol တခုလားမသိဘူး။ ရလာတဲ့ analog signal တွေကို၊ I/ O ခံပြီး၊ digital signal ပြောင်းမယ်။ ပြီးရင် bus ပေါါတင်မယ်။ တချို့ကျတော့ digital signal အနေနဲ့ထုတ်ပေးမယ်၊ ပြီးရင် bus ပေါါတင်မယ်၊ အဲလိုလား အကို။
ဒူဒူစဉ်းစားကြည့်တာက၊ sensor မှတဆင့် addressing နဲ့ လုပ်တာလားရယ်လို့ပါ။ bus system တွေမှာ၊ data, alarms, parameters နဲ့ diagnostic data တွေပါသလို၊ လိုအပ်ရင် purely cyclically communication အနေနဲ့ data တွေကိုပေးပို့နိုင်တယ်လို့၊ ကြားဖူးလို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် Computer protocol နဲ့ပါ နောက်ဆုံး latest က Can Protocol ပါ အားလုံး ဆယ်မျိုးလောက်ရှိပါလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းမှာဖေါင်္ပြပေးပါမယ်
မဟုတ်ပါဘူး, OBD2Scanner နဲ့ Link လုပ်လိုက်ယင် Monitoring လုပ်ထားတဲ့ စံနစ်တိုင်းရဲ့ Live data တွေကို Scope or Multimiter or so on.... Scanner software မှာ Built in ပါတဲ့ Tools ထဲက နှစ်သက်ရာတခုခုနဲ့ ကြည့်နိုင် သကဲ့သို့
Data တွေဘယ်လိုစီးဆင်းသလဲ ချိတ်ဆက်လဲဆိုတာတော့မသိပါဘူး I/O တွေ Protocol Converter တွေမပါတာတော့သေချာတယ် 1996 Model ကနေအထက် OBD2[ On-Board Diagnosis ] စံနစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားတွေမှာ ECU ၅ခု ၆ခုပါဝင်ပြီး Engine ECU က Main ECU အဖြစ် Data Link များချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Engine Management Component Testing ကိုကြည့်ကြရအောင်
1] Service Adjustment မှာ
Idle speed 570-730 rpm,
Co2 level 0.4 % max - at tail pipe.
Throttle initial adjustment not possible.
2]Fuel System မှာ
Regulate - Vacuum on - 2.5-3.0 bar
System - Vacuum off - 3.0-3.5 bar
Fuel Delivery Rate
0.8 liter/30 sec approx
Injector have Multi Plug
Terminal 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8 =15-17 Ohm
Fuel Pump ကိုစစ်ဆေးရန် Ignition Key သော့ကိုသေချာစွာပိတ်ပါ။
Fuel Pump Relay ကိုဖြုတ်ပါ
ပုံပြပါအတိုင်း Relay အထိုင်က Terminal No 8 and9ကို ခလုတ်တခုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ခလုတ်ဖွင့်လျှင် Fuel pump လည်သံကြားနေရပါမည်
Throttle Position Sensor စမ်းသပ်ပုံအဆင့်ဆင့် Mass Air Flow sensor စမ်းသပ်ပုံအဆင့်ဆင့် Intake Air Temperature Sensor 20C မှာ 2300-2700 Ohm , 40C မှာ 1000-1300 ohm , 60C မှာ 560-670 ohm နင့် 80C မှာ 290-370 ohm ရှိရပါမည်။
Engine Control Module ECM ကိုစစ်ဆေးပုံအဆင့်ဆင့်, Vehicle Sensor များ Power Steering Pressure Sensor နှင့် Vehicle Speed Sensor ကိုစစ်ဆေးပုံအဆင့်ဆင့်, ECM ၏ Pin Data များ
အကိုရေ...သူက၊ protocol တခုလားမသိဘူး။ ရလာတဲ့ analog signal တွေကို၊ I/ O ခံပြီး၊ digital signal ပြောင်းမယ်။ ပြီးရင် bus ပေါါတင်မယ်။ တချို့ကျတော့ digital signal အနေနဲ့ထုတ်ပေးမယ်၊ ပြီးရင် bus ပေါါတင်မယ်၊ အဲလိုလား အကို။ ဒူဒူစဉ်းစားကြည့်တာက၊ sensor မှတဆင့် addressing နဲ့ လုပ်တာလားရယ်လို့ပါ။ bus system တွေမှာ၊ data, alarms, parameters နဲ့ diagnostic data တွေပါသလို၊ လိုအပ်ရင် purely cyclically communication အနေနဲ့ data တွေကိုပေးပို့နိုင်တယ်လို့၊ ကြားဖူးလို့ပါ။
ဒီလိုပါ ဒူဒူရေ။ OBD ဆိုတဲ့ On-Board Diagnostics ဟာ၊ self-diagnostic and reporting capability အနေနဲ့၊ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြအသိပေးတဲ့၊ စနစ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၆၉) လောက်ကတည်းက၊ Volkswagen ရဲ့ fuel injection system မှာ၊ scanning capability အနေနဲ့ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၇၅) မှာ Datsun 280Z engine ရဲ့ fuel injection system မှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၈၀) မှာတော့ GM ဟာ၊ ECM လို့ခေါါတဲ့ Engine Control Module ကို၊ assembly line အနေနဲ့တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ အချက်အလက် data တွေကိုရရှိဖို့ 'assembly line diagnostic link' တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
proprietary interface အနေနဲ့ signal တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်သလို၊ communications protocol ကိုလည်း၊ အသုံးပြုရပါတယ်။ communications protocol ဆိုတာကတော့၊ digital message formats အဖြစ်၊ ပြဌာန်းထားတဲ့ data and massage exchanging rules တွေဖြစ်ပြီး signaling, authentication နဲ့ error detection and correction capabilities တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ 'assembly line diagnostic link' ဟာ၊ Pulse-width modulation signaling ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ (၁၉၈၈) လောက်မှာတော့၊ The Society of Automotive Engineers (SAE) အသင်းမှ၊ standardized diagnostic connectors တွေနဲ့ diagnostic test signals တွေကိုသတ်မှတ်၊ ပြဌာန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
Fig. EMS - Engine management system
Fig. On board diagnostic
အပေါါမှာ ဖော်ပြထားတဲ့၊ system ကို ဥပမာအနေနဲ့ ကြည့်လျှင်၊ signal conditioning circuit မှ၊ analog, frequency နဲ့ digital signals တွေကို၊ engine management system ကိုပေးသွင်းပြီး၊ on board diagnostic (OBD) capability အနေနဲ့ထုတ်ယူတာ၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ sensors တွေမှပေးပို့လာတဲ့ signals တွေကို၊ လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲကာ၊ diagnostic data တွေအဖြစ်ထုတ်ယူခြင်းလို့၊ ပြောနိုင်ပါတယ် ဒူဒူရေ။
Reference and Image credit to : Retrofit Engine Management System, (http://www.embedds.com/retrofit-engine-management-system-the-savor-for-older-gasoline-engines/), on board diagnostics, (http://www.elec-intro.com/on-board-diagnostics)
Sorry ပါ ကိုဒူဒူရေ ကျနော့်အဖြေမပြည့်မစုံဖြစ်သွားတာခွင့်လွှတ်ပါ။
Wiring Circuit များ နှင့် Data များ
1] Engine Management component
2] Air condition component
3] Anti-lock Brake System component
4] Air bags system component
5] Fuse box and Relay
6] General component များ၏ တည်နေရာများကိုအတိအကျ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ခြင်း ကြောင့်လုပ်ငန်းလျှင်မြန်စေပါသည်။
ကျနော်ပုံတွေကို ကျနော်ထင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကိုလှမင်းမောင်ခင်ဗျား။
တခါတည်းလည်း ပုံအကြီး ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပါ။
အဆင်မပြေရင် PM ပို့လိုက်ပါ။ ကျနော်ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်။
MERCEDES BENZ HGV
VOLVO HGV တို့ဖြစ်ပါသည်။
1000,4Runner, Aurion, Avalon, Aveniss, Camry, Carina, Celica, Celica Supra, Corolla, Corolla Estate, Corolla Verso/Combi Van, Corona, Crown, Dyna, Echo, Hiace, Hiace power Van, Hilux, Klinger, Landcruiser, Landcruiser Prado, Lexcen, Spacecruiser, MR II , Paseo, Prius, RAV 4, Starlet, Supra, Tarago, Tercel, Yaris တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနှစ်အလိုက် TOYOTA ကားအမျိုးအစားများကိုဖေါ်ပြပါမည်။
1968-71 Toyota Crown 2.3 engine , Engine Code 4M , 124 hp @ 5200 rpm
1969-71 Toyota Corona 1.8 engine , Engine Code 8R & 8R-B , 108 hp@5500rpm & 120 hp@6000rpm
1970-79 Toyota Corolla 1.2 engine , Engine Code 3K , 68 hp @ 6000 rpm 1970-74
1971-85 Toyota Celica 1.6 engine , Engine Code 2T , 75 hp @5200 rpm 1971-77
1974-78 Toyota 1000 1.0 engine , Engine Code 2K , 45 hp @ 6000rpm 1974-78
1977-97 Toyota Hilux 1.6 engine , Engine Code 12R, 66 hp @ 6000rpm 1977-82
1977-97 Toyota Hilux 4x4 2.0 engine , Engine Code 18R, 90 hp @ 5000rpm 1977-82
1977-82 Toyota Celica 2.0 engine , Engine Code 18R, 90 hp @ 5000rpm 1977-82
1977-82 Toyota Celica 2.0 engine , Engine Code 18R-G, 123 hp@ 5800rpm 1977-82
1979-86 Toyota LiteAce 1.3engine , Engine Code 4K , 57 hp @ 5200rpm 1979-86
1976-81 Toyota Crown 2.6 Super eninge , Engine Code 4M, 135hp @5400rpm 1976-81
1980-83 Toyota Crown 2.8 Super eninge , Engine Code 5ME, 145hp @5000rpm 1980-82
1981-85 Toyota Celica 2.8 engine , Engine Code 5M-GE , 170 @ 5600 rpm 1981-85
1981-85 Toyota Celica Super 2.8 engine , Engine Code 5M-GE , 170 @ 5600 rpm 1981-85
1981-88 Toyota Landcruiser [60 series] 4.0D engine , Engine Code 2H, 105 @ 3500 rpm 1981-88
1981-90 Toyota Landcruiser[60 series]4.0D Turbo engine, Engine Code 2H-T,136@3500 rpm 1981-90
1981-85 Toyota Landcruiser[60 series] 4.2 engine, Engine Code 2F,120 hp 1981-85
1981-85 Toyota Landcruiser[70 series] 4.2 engine, Engine Code 2F,120 hp 1981-85
1982-95 Toyota Hiace 2.2 D engine , Engine Code L , 66 hp @4200 rpm 1982-85
1982-88 Toyota Tricel 4x4 1.5 engine , Engine Code 3A , 71hp @ 5600 rpm 1982-88
1983-88 Toyota Hilux 1.8 engine , Engine Code 2Y , 79 hp @ 4800 1983-88
1983-88 Toyota Hilux 4x4 2.0 engine , Engine Code 3Y , 88 hp @ 4600 1983-88
1983-91 Toyota Camry 1.8 engine , Engine Code 1S , 90 hp @ 5200 1983-85
1982-85 Toyota Celica 2.0 engine , Engine Code 21R, 105 hp@ 5200rpm 1982-85
1983-87 Toyota Corolla 1.3 engine , Engine Code 2A , 65 hp @ 6000 rpm 1983-85
1980-87 Toyota Corolla Estate 1.3 engine , Engine Code 4K , 60 hp @ 5600 rpm 1980-87
1984-86 Toyota Camry 2.0 engine , Engine Code 2S-E , 107 hp @ 5200 1984-86
1984-88 Toyota Carina II 1.8 engine , Engine Code 1S-E , 101 hp @ 5200 1984-88
1984-88 Toyota Corolla 1.6 engine , Engine Code 4A , 86 hp @ 5600 1983-87
1984-88 Toyota Corolla 1.6 engine , Engine Code 4A-LC , 73 hp @ 5400 1983-87
1984-87 Toyota Corolla 1.6 GT engine, Engine Code 4A-GE , 124 hp @ 6600 1983-87 [Carburettor Injection System]
1985-93 Toyota Hiace 2.0 engine , Engine Code 3Y , 88 hp @ 4600 1985-93
1985-93 Toyota Hiace 2.2D engine , Engine Code L , 66 hp @ 4200 1982-85
1986 မှ ယခုထိ ထုတ်လုပ်ထားသောကားအမျိုးအစားလိုက် အချက်အလက်များသိလိုပါက http://www.autodata.com.au/software.php?product=1 တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဖော်ပြပါ Data software သည်ကိုယ်တိုင် ရောဂါရှာဖွေခြင်း ပြုပြင်ခြင်းမလုပ်နိုင်ပါ၊ မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်မည့် ပညာရှင်ကို တိကျသေချာသောသတင်းအချက်အလက်များ အလျှင်မြန်ဆုံးရရှိစေ ပြီး Scanner မှဖတ်ယူရရှိထားသော DTC Diagnostic Trouble Code များအတွက် ပြုပြင်မှုများကိုအချိန်တိုတိုနှင့် အထိရောက်ဆုံး ပြီးမြောက်စေမှာဖြစ်ပါသည်။
data software နေက်တခုပါ http://www.youtube.com/watch?v=Fr_rnruUUQ8 လေ့လာကြည့်ပါ။ ipad working with alldata and worlpac speedial http://www.youtube.com/watch?v=Abt8JzGz0Fo&feature=related